आज कस्तो छ तपाईंको भाग्य ? – Sandesh Munch
आज कस्तो छ तपाईंको भाग्य ?
July 21, 2020 129
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)पुराना समस्याहरुलाई केही समय दिएर सकाउन सकिनेछ भने नयाँ नयाँ काम गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरुलाई सजिलै हराउन सक्नेछन् भने पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो नतिजा ल्याउन सकिनेछ । अदालती निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । साँझको समय मध्यम रहेकोले आफन्तसँग टाडिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) कुटुम्बसँग मनमुटाव बढ्ने हुँदा आजको दिन टाढा नै रहनु राम्रो रहेको छ । बोल्दा वा निर्णय गर्दा ध्यान दिनुहोला आत्मघाती पनि हुनसक्छ । खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । माया प्रेममा अविश्वास बढ्नेछ भने पति–पत्नीबीच विश्वासको वातावरण गुम्ने खतरा रहेको छ । साँझको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ । यात्रासँग सम्बन्धित कामहरु हुनेछन् ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा)कामहरु स्वतः स्फुर्त रुपमा अगाडी बढ्नेछन् । व्यापार व्यवासाय फस्टाएर जाने तथा नयाँ प्रकृतिको व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो हुनुको साथै घर परिवारमा बिग्रेको सम्बन्ध सुधार भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा मिष्ठान्न भोजनमा साथ रमाइलो गरी समय कटाउन सकिनेछ l
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) काम गर्दा ख्याल गर्नु जरुरी देखिन्छ,समयमा कामहरु सम्पन्न नहुदा मान सम्मानमा आघात पर्न सक्छ । पढाइ लेखाइमा तपाईं आफ्नै कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । मायाप्रेममा अविश्वास बढ्नेछ भने सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउने योग रहेकोछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा सामान्य आम्दानी हुनेछ । प्रविधिको सहयोग लिँदै अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)आफन्तजन तथा दाजुभाइबाट प्रशस्त सहयोग पाइनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बडेर जानेछ । तरलपदार्थ जस्तै हाइड्रो, पानीजस्ता उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दा उचित प्रतिफल पाइनेछ । सवारीसाधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ । परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ । बिद्यामा तपाईंले गरेको मिहिनेत खेर जानेछैन । साँझपख समय मध्ययम रहेकोले खर्च बढ्ने योग रहेकोछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना रहेकोछ । राजनीति तथा समाजसेवीहरुले राज्यबाट लाभ पाउने समय रहेकोछ भने व्यापारमा समय लगानी गर्नेहरुले मनग्गे धन कमाउन सक्नेछन् । बुवा तथा बुवा सरहका मानिसबाट तपाईंको काममा सहयोग हुनेछ भने आफन्त तथा सहयोगीहरुले तपाईंकै साथ दिनेछन् । माया प्रेमको बन्धन कसिने तथा पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजाको साथ पुरस्कार जित्न सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते)लामो धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला बाटोमा दुःख हुनसक्छ । सामाजिक कामको सिलसिलामा व्यस्त हुने समय रहेको भए पनि प्रतिफल शुन्य जस्तै हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरीएको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्नसक्छ ख्याल गर्नुहोला ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)समय मध्ययम रहेकोले कुनै व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नको लागि केहि दिन कुर्नुहोला । आर्थिक व्यावस्थापनका लागि गरिने कामहरु अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी बीचमानै अवरुद्ध हुन सक्छन्,ध्यान दिनुहोला । हरेक क्षेत्रमा अवसरवादी हावी हुनाले कामहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । पढाइ लेखाइमा एकरुपमा नहुँदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा अविश्वास तथा धोका हुने अधिक सम्भावना रहेको छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे)व्यापार व्यवसायमा लगानी वढाई आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । भौतिक सम्पती तथा मानव निर्मित वस्तुहरु प्राप्तिको गतिलो योग रहेकोछ । लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रहरुसँग भेट हुनेछ भने माया प्रेममा आत्मियताको बढोत्तरी हुनेछ भने रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । विद्यार्थीहरुले अध्ययनमा सफलता पाउँनेछन् भने गुरुहरुको राम्रो सहयोग पाइने हुदा गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । साँझपख दिदि बहिनीहरुसँग मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) प्रतिस्पर्धामा तपाईंकै जित हुनेछ भने सहयोगीको साथ पाइने हुनाले नयाँ प्रकृतिको काम गरी मनग्गे धन तथा सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा एक कदम अगाडि बढी नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । न्यालयबाट हुने न्याय सम्पादन तपाईंकै पक्षमा हुनेछ । आफन्त तथा मावलीको साथ पाइने हुनाले दैनिकी थप सजह हुनेछ l
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा)व्यापार व्यवसायमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुदा दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् । मायाप्रेममा एक अर्कालाई अविश्वास गर्नाले छुट्टिनु पर्ने अधिक सम्भावना रहेकोछ । मानव निर्मित तथा भौतिक वस्तुको प्रयोग गर्दा सावधान अपनाउनु होला अप्रिय घट्ना घट्न सक्छ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला पेटसम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । साझको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा प्रगति भएर जानेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अरु व्यावसायमा नाफा कमाउन निकै नै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । सवारी साधन तथा घर जग्गाको कारोबारबाट केहि मात्रमा लाभ लिन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउँन बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आमा तथा आमासरहका मानिससँग मनमुटाब बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुनेछैन ।
Prevटिकाटालो त भयो, बिहेको सपना अधुरै रह्यो : इन्जिनियर सतीशको २५ वर्षको उमेरमै दुखद अन्त्य
Nextदेख्ने बितिकै चोखो मनले ॐ लेखी माथि लाइक 👆👆👆 र #२_ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस् मनले आटेको कुरा पुग्नेछ ।ॐॐ
एक मुठी अलैचीले चम्काउछ भाग्य
दु:खद खबर – भान्सामा काम गरिरहेकी सुशिलाको स’र्पले ड’सेर ग’यो ज्या’न !
हातमा कति शं’ख चक्र छ के फल दिन्छ ? जानी राखौ
कोरोना संक्रमित एक युवाले क्वारेन्टाइनमा आत्महत्या गरेका छन् ।